၂၂ ကီလို ကွန်ကရစ်တုံးကို ဆွဲထားနိုင်တဲ့ OnePlus7Pro ရဲ့ Pop-up Selfie Camera
15 May 2019 . 5:10 PM
မေ ၁၄ မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ OnePlus7Pro ရဲ့ Marketing Video ကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတောင် Durable ဖြစ်လွန်းလို့ Pop-up Selfie Camera က ကျိုးမသွားတာလဲ အရမ်းသိချင်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Pop-up ဆိုတဲ့ Trend ဟာ OPPO ကစလို့ Find X မှာ စသုံးလာတာပါ။ ဒီဖုန်းမှာတော့ Motorized Pop-up Selfie ကင်မရာအသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းထွက် တရုတ်ဖုန်းအားလုံးမှာ Pop-up ၊ Slider စသဖြင့် Selfie Camera Housing ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ခေတ်စားလာတယ် ပြောရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ပရိသတ်တွေကို စနိုးစနှောင့်ဖြစ်စေတာက ဘယ်လောက် အကြိမ်ရေထိ အတွန်းခံလဲ? အများဆုံး ၂ သိန်းကျော်အထိလို့ ကုမ္ပဏီတွေ အာမခံကြသလို OnePlus ကတော့ သူ့ရဲ့ Pop-up က အကြိမ်ရေ ၃ သိန်းအနည်းဆုံး အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုပါတယ်။
Photo: IT Pro
ဟုတ်ပြီ။ ၃ သိန်းဆိုတော့ ဖုန်းတလုံးရဲ့ Life Span နဲ့ယှဉ်ရင်မဆိုးဘူးလို့ ပြောရပေမယ့် မတော်တဆဆိုတဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါ့မလား။ Selfie Camera ဖွင့်ထားတဲ့ချိန် မတော်တဆပြုတ်ကျသွားရင် Pop-up Motor ကျိုးသွားနိုင်မလား? Samsung တောင် အချိန်ကြာလာရင် Major Weakness ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Pop-up အိုင်ဒီယာကို Skip ခဲ့ပြီး Punch Hole နဲ့ပဲ ပွဲထွက်ခဲ့ရတယ်။
နောက်ပြီး ဖုန်းတလုံးကို FullScreen Display နဲ့မြင်လိုက်ရင် ဘယ်သူမဆိုကြွေဆင်းသွားမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါမယ့် Pop-up ဆိုတာကို လူတိုင်းမနှစ်သက်သလို OnePlus ထဲမှာတောင် Fan Base ကွဲနေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ၂၂ ကီလို (ပေါင် ၅၀ လောက်) လေးတဲ့ ကွန်ကရစ်တုံး အလေးချိန်ကို ဆွဲထားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ Theory အရဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ Promo ကြော်ငြာကို ဒီ Link မှာ လေ့လာပြီး ထင်မြင်ချက်တွေ သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ၂၂ ကီလိုရှိတဲ့ ကွန်ကရစ်တုံးဟာ Motion Less ဖြစ်နေတယ်။ Accidental Damage ဖြစ်ရင် ကြော်ငြာဗီဒီယိုထဲကလို Slow Paced ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ Pop-up ပွင့်လျက်နဲ့ အခန့်မသင့် ဇောင်းနဲ့သွားရိုက်မိရင် Force ပါတဲ့ Action ဖြစ်နေလို့ ကျိုးမှာကျိန်းသေပါ။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဘယ်လိုမြင်လဲ?